Ampidino House Flipper ho an'ny Windows
Ampidino House Flipper
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (119.00 MB)
Ampidino House Flipper,
House Flipper no lalao famolavolana trano be mpitia indrindra aminny finday (Android APK sy iOS) ary sehatra PC. Ao aminny lalao simulation malaza, mividy trano ianao, manamboatra azy ireo, manatsara ny trano rava. Avy eo apetrakao amidy. Asa maro no miandry anao ao aminny House Flipper, ny lalao fananganana, famolavolana, fivarotana trano. House Flipper dia mandeha aminny Steam!
Ny programa fanavaozana trano aseho aminny fantsom-pahitalavitra dia eto miaraka aminny House Flipper aminny endrika lalao. Ekipa tokana ianao. Mividy trano antitra, maloto, simba ianao, manavao azy ireo ary mametraka azy ireo amidy. Manana ny fitaovana ilainao rehetra ianao aminny fanavaozana ny trano. Rehefa miditra ao an-trano ianao dia aseho ho toy ny lahasa ireo efitrano sy faritra ilainao hamboarina. Manao ny fanamboarana sy fanavaozana isan-karazany ianao. Rehefa mahavita iraka ianao dia misy zavatra vaovao tsy voasokatra izay hampiakatra ny sandanny tranonao. Tsy sarotra ny iraka ary tsy misy fetrandro, fa tsy afaka mandroso ianao raha tsy vita ny iraka rehetra. Etsy ankilany, liana aminny atinny trano ianao, izany hoe ny endrika anatiny.
House Flipper dia traikefa tsy manam-paharoa ho anao ho ekipa fanavaozana olona tokana. Mividiana, manamboatra ary manatsara trano efa simba ary mivarotra tombony!
Ireo zavatra hampiasainao dia ho fitambarana fitaovana. Ampiasao izy ireo aminny zavatra hoentinao aminny marotoa, fandavahana, famolahana ary fanodinana, ary koa ireo zavatra tokony hamboarina, amboarina na diovina.
Hiaina ny endrika famolavolana sy haingo anatiny tianao. Mamolavola ary omeo entana an-jatony maro ny tranonao hisafidianana malalaka. Asehoy ny talentanao!
Te hanana endrika anatiny ve ianao ary te hameno ny efitrano foana aminny fomba tianao indrindra? Azonao atao ny mividy trano banga sy handravaka azy. Araka ny hevitrao, injeniera ihany no mahazo zavatra toa izany? Afaka mifantoka aminny fanamboarana sy fivoriambe ianao. Manam-pahaizana ve ianao aminny fijery Fihetsika kely mitondra fanovana lehibe? Azonao atao ny mividy trano mora vidy ary manaova kanto azy miaraka amina fanampitana fanaingoana sasany sy fanamboarana hafa.
Ny tena tanjonny orinasa mpivarotra trano dia ny hahazoana tombony. Te handray risika ve ianao? Ahoana ny aminny fampiasam-bola? Kajy ny tombom-barotrao ary fantaro ny tahanny risika / valisoa tsara indrindra ho anao.
Ny orinasan-tseranana an-trano dia mitaky be. Mampivoatra sy manasongadina ny fahaizanao. Makà fitaovana tsara kokoa. Mahazoa vola hampitomboana ny fampiasam-bolanao ary hanafainganana ny fampandrosoana aminny alàlanny fampiharana teknika vaovao. Maka fahafinaretana!
Fepetranny rafitra Flipper House
Ny fitaovana tsy maintsy anananny PC-nao hilalao ny House Flipper dia voatanisa etsy ambany. Aza adino fa ho afaka milalao ny lalao aminny toerana faranizay ambany indrindra aminny solosainao ianao izay mahafeno ny fepetra takiana aminny rafitra farafahakeliny, ary afaka milalao tsara ny lalao ianao, nefa tsy mangatsiaka na miakanakana eo aminny solosainao izay mahafeno ny fepetra takianny rafitra. Fepetranny rafitra PC Flipper PC;
Rafitra miasa: Windows 7 64-Bit na vaovao
Mpandrindra: Intel Core i3 3.20GHz / AMD Phenom II X4 955 3.2GHz
Fahatsiarovana: RAM 4GB
Karatra horonantsary: ​​Nvidia GeForce GTX 560 / AMD R7-260X
Fitehirizana: habaka malalaka 6GB
Karatra horonantsary: ​​Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580
House Flipper Specs
Haben'ny rakitra: 119.00 MB
House Flipper no lalao famolavolana trano be mpitia indrindra aminny finday (Android APK sy iOS)...
Warplane Inc. dia lalao simulator sidina 2D ahafahanny mpilalao mianatra momba ny tantaranny ady,...
World of Tanks, izay momba ny Ady Lehibe Faharoa, dia nahazo ity loka ity taminny sokajy lalao...
Ny Sims 4 no lalao farany andiany lalao simulasi malaza anny Electronic Arts The Sims. Ny Sims 4...
Euro Truck Simulator 2 dia simulasi kamio, lalao simulator izay misarika ny saina aminireo maody....